Myanmar Entrepreneur Group: နှလုံးသားထဲက Entrepreneur (2)
Posted by : KO WAI Posted @ 3:14 PM
certain condition cube September 4, 2008 at 9:24 AM
ယုံကြည်ချက်ဆိုတာ သက်စောင့်ဆေးတစ်မျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် တန်ဆေး --- လွန်ဘေးတဲ့။ တတိယပိုင်းကို စောင့်မျှော်လျှက် ----
flower September 5, 2008 at 3:00 PM
ဟုတ်ပါတယ် ယုံကြည်မှုဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ် ။ အဲ့ယုံကြည်မှုကို အမြဲ update and upload လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်မှာ ကိုယ့်မှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအား ရှိလားမရှိဘူးလား........ဘာတွေ လိုအပ်နေလဲ ဘာတွေဖြည့်ဖို့လိုသလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် SWOT analysis လုပ်ပြီး confidence ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စောင့်မျှော်လျက်ပါ
flower September 5, 2008 at 3:30 PM
An entrepreneur is essentiallyavisualizer and actualizer. Successful entrepreneurs realize that if it is to becomeareality, they are the ones to make it happen. An entrepreneur is someone who is able to continually reinvent himself, and to rethink an entire project (and possibly start all over) if he finds that something is not right. Thus, someone who has vision, flexibility, andarisk-taking nature fares very well in self-employment ventures.